Kubbada Cagta Ayay Fadeexad Ku Tahay In Aanu Sadio Mane Ku Jirin Saddexda Xidig Ee Ballon D'Or Ugu Sareeya Iyo Mana Oo Xaflada Qaadacay. - Gool24.Net
Kubbada Cagta Ayay Fadeexad Ku Tahay In Aanu Sadio Mane Ku Jirin Saddexda Xidig Ee Ballon D’Or Ugu Sareeya Iyo Mana Oo Xaflada Qaadacay.
Sadio Mane ayaa qaadacay in uu ka soo qayb galo xaflada abaal marinta Ballon d’Or kadib markii uu ka cadhooday booska uu ka galay codbixintii Ballon d’Or 2019 wuxuuna helay taageero wayn oo kubbada cagta ah.
Sadio Mane ayaa Liverpool ku soo hogaamiyay koobabka UEFA Champions League iyo UEFA Super Cup laakiin kaalinta uu ka galay abaal marinta Ballon d’Or ayaa noqotay mid aan isaga iyo dad badan u cuntamin.
Wariyaha Lassna Camara ayaa xaqiijiyay in Sadio Mane aanu ka soo qayb galayn xaflada abaal marinaha Ballon d’Or isaga oo sababta ku sheegay in uu ka cadhooday halka aan fiicanayn ee uu codbixintii ka galay.
Sadio Mane ayaa loo arkayay in uu ka mid yahay saddexda xidig ee ugu sareeya sanadkan 2019 ee loo arkayay in uu kaalmaha hore soo galayo kadib xili ciyaareed layaab lahaa oo uu soo qaatay.
Dhinaca kale khabiirka kubbada cagt Canal Plus ee Pierre Ménès ayaa markiisa cadho wayn ka muujiyay in Sadio Mane aanu ku soo bixin magacyada ugu sareeya abaal marinta Ballon d’Or.
Khabiirka Canal Plus ee Pierre Ménès ayaa aminsan in ka maqnaanshaha Sadio Mane ee saddexda xidig ee ugu sareeya Ballon d’Or ay kubbada cagta fadeexad ku tahay.
Pierre Ménès oo arintan Sadio Mane ka hadlaya ayaa yidhi: “Sadio Mane in aanu saddexda xaflada ugu saraysa ku jirin waa fadeexad, waxayna kubbada cagta ka dhigaysaa mid cay ama aflagaado ah”.
Inkasta oo Sadio Mane uu ku jiro liiska tobanka xidig ee ugu sareeya abaal marinta ballon d’Or, haddana waxaa dareen cadho leh abuurtay in aanu ka mid ahayn saddexda xidig ee abaal marintan ku tartamaya.
Sida uu xaqiijiyay Lassna Camara, waxa uu Sadio Mane ku seegay xaflada Paris cadho uu ka qaaday kaalinta uu ka galay codbixintii la sameeyay.